Ancelotti Oo Weeraray Chelsea Ka Dib Dalabkii Vidal,Muxuu Yiri? » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ England/Ancelotti Oo Weeraray Chelsea Ka Dib Dalabkii Vidal,Muxuu Yiri?
Ancelotti Oo Weeraray Chelsea Ka Dib Dalabkii Vidal,Muxuu Yiri?
Muna Hassan January 5, 2017
Tababaraha kooxda Bayern Munich Carlo Ancelotti ayaa beeniyay in Arturo Vidal uu kusii jeedo Chelsea mustaqbalka. Tababaraha reer Talyaani ayaa ka hadlay warbaahinta Jarmal isagoo la wadaagay fikirradiisa ku saabsan wararka la xiriirinaya kala iibsiga laacibka heerka caalami ee dalka Chile , suurta galnimadana uu la midoobo tababarihiisii hore ee Antonio Conte oo hadda Chelsea maamula.
Ma jiraan wax qarsoon oo tababaraha reer Talyaani waa uu jecelaa waqti dheer xiddigii hore ee Juventus inay midoobaan. Vidal iyo Conte Labada waxay Juventus yimaadeen xagaagii 2011. Intii lagu guda jiray saddex sano Conte uu la joogay Juventus, Arturo Vidal ayaa noqday mid ka mid ah ciyaartoyda khadka dhexe ugu fiican adduunka, si ka badan sidaas Old Lady ayaa markaan kula soo saxiixatay €10 million sanadkii 2011 , waxayna Bayern Munich afar sano kasiisay €40 million oo macaash badani ugu jiray.
Conte ayaa leh doorka ugu badan farsamada iyo horumarka booska dhexe Vidal marka laga hadlaayo. Wareysi uu dhawaan bixiyeyna waxa uu ku sheegay sida ay baahisay Sky Italia inuu jeclaan lahaa hadii uu helayo laacibka reer Chilean , dagaal kastana uu u galaayo.
​warbaahinta England ayaa daabacday dhawaan in Vidal uu usoo dhaqaaqi doono Chelsea, laakiin Carlo Ancelotti waxa uu meesha ka saaray sheekadaas isagoo xusay in suuqa kala iibsiga uusan saarneyn laacibkaan. “Vidal kuma socda Chelsea waana war aan badneyd sidaa waxa loo sheegayo”, Conte waa macalin la hadlay warbaahinta Germany balse Vidal waxa uu qandaraas kula jiraa naadiga Bayern Munich ilaa bisha June 2019.
Teamka 11 ka ciyaaryahan ee ugu fiicnaa Premier League oo laso saaray lugtii u dambaysay
Aubameyang Oo Laga Xiiseenaayo horyaalka China, Waa Imisa Mushaarkiisa?